Alahady Tsotra faha-8 Taona A Mandavantaona - Fihirana Katolika Malagasy
Alahady Tsotra faha-8 Taona A Mandavantaona
Daty : 28/05/2008
Ray Aman-dreny tsy mahafoy Zanaka Andriamanitra.
Antsoantso ataontsika matetika ny hoe: "Nafoin'ny Tompo aho; hadinon'ny Tompo aho" (Vakiteny I). Nahoana ilay Andriamanitra Fitiavana no mamela antsika hijaly? Toa sarotra ny hino ny fampanantenana nataon'YHWH tamin'i Siona hoe : "Na hanadino aza ny reny, Izaho (YHWH) tsy mba hanadino anao".
Ny traikefam-piainantsika no hahafahantsika mandalina sy manamafy izany fiainam-pinoana izany. Ny hahazoana izay dera tandrify ny tsirairay manko, hoy i Md Paoly dia ny hevitry ny fo, izay hisehoantsika eo anatrehan'Andriamanitra (Vakiteny II). Ny antony hinoantsika ary araka izany dia tsy sanatria tombontsoan'ny nofo na noho ny masom-bahoaka sy fitia te hisehoseho ively ihany, fa ilay fifandraisam-po lalina amin'izy Tompo.
Indraindray manko (na mazàna mihitsy aza) dia lazaintsika ho tsy mandeha ny zavatra iray, rehefa miteraka fatiantoka ara-toekarena na miteraka fahhaverezana tombotsoa ara-nofo ihany. Dia adino ny hafatr'i Jesoa mba "hikatsaka ny Fanjakan'Andriamanitra alohan'ny zava-drehetra" (Evanjely Mt 6, 33). Tsy izay hahamasina sy hanatsarana ny fifandraisana amin'ny Tompo no lasa laharam-pahamehana fa izay hanangonana harena, voninahitra sy hafinaretana no mahamaika.
Rahefa teren'ny adim-piainana sy ny fikatsahana ny hohanina, ny fitsinjovana ny vodiandroho merika sy ny fanatsarana ny ho avy anefa dia tsy moramora ny mampifanaraka izany amin'ny fikatsahana ny Fanjakan'Andriamanitra. Tsy afaka ny hihaina ara-panahy ihany anefa ny olona, mampitebiteby lalandava ny ho avy sy ny fahasarotan'ny fiainana.
Ny hanonona ny salamo faha-61, hiandry "mana milatsaka avy any an-danitra", hiandry famonjena avy amin'ilay Fiarovana avo sy Vatolampy (Salamo setriny), tsy mandeha ho azy. Sarotra ny hanantena ny valala any an-danitra. Ezaka tsy maintsy imasoana amin'ny maha-kristianina anefa ny "miondrika mampiasa ny zavatra mandalo ety an-tany saingy hiraiki-po amin'izay maharitra mandrakizay".
Izay no hahafahantsika miaina ny Evanjely ka hizaka ny fahoriana mianjady isan'andro raha izay no hahafahana manompo an'Andriamanitra. Ny fanompoana ny vola, ny fikatsahana voninahitra sy fahafinaretana dia manesotra ny toerana ho an'Andriamanitra ao am-pontsika. Mazàna miezaka mandamina ny feon'ny fieritreretana isika ka hiezaka hitsara tena sy hitsara ny hafa, hahitana fialantsiny sy fanazavana amin'izay mety ho fitondran-tenantsika.
Andriamanitra izay mahita ny fo (Vakiteny II) no tokony hatahorantsika, ka handinihantsika marina tena tokoa amin'izay hironan'ny fontsika, ka hanompanantsika ny hery ananantsika, hanompoana an'Andriamanitra irery ihany, izay no hahatsapantsika fa ny fitondrana ny Hazofijaliana mba hanarahan-dia an'i Kristy no lalana mitondra antsika ho amin'ny fahamasinana.
Raha tsy tsapantsika fa mamy ny miaraka amin'Andriamanitra, raha tsy efa nandramantsika ny hafalian'ny miara-monina aminy dia tsy haniry ny lanitra velively ny fontsika. Ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka izy, ka ny fahatsapana izany maha-zanaka izany dia dingam-piainana atombotsika ka izorantsika tsikelikely eo am-pitanisana ireo soa notovozintsika avy aminy.
< Zoma Manaraka ny Alahady Faharoa Pantekoty : Fankalazana manetriketrika ny Fo Masin'i Jesoa
Ny vatana aman-dRan'i Kristy >
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0466 s.] - Hanohana anay